Isticmaalidda gvSIG sida Open Alternative Alternative
15aad International gvSIG Shirka - Maalinta 2
Geofumadas wuxuu si shaqsi ah u daboolay seddexdii maalmood ee shirkii 15th gvSIG International ee magaalada Valencia. Maalintii labaad, kal-fadhiyadii waxaa loo qaybiyay 4 qaybo mawduucyo ah sida maalintii hore, oo ka bilaabanaya gvSIG Desktop, halkan wax walba oo la xiriira wararka iyo isku dhafka nidaamka ayaa la muujiyay. Kuwa ku hadla dhismaha hore, ...
Ku dhowaad wax walba waxay diyaar u yihiin 7th gvSIG Latin America iyo Shirka Caribbean, kaas oo lagu qaban doono Mexico. Waxaan u aragnaa inay qiimo badan tahay in si tartiib tartiib ah loogu daro hay'adaha dowliga ah, kuwaas oo muddo sanad ah ay gacanta ku hayeen softiweer ay leeyihiin, hanaan inta badan xaaladaha laga bilaabay hirgelinta mashaariicda maalgelinta caalamiga ah ee ...
Xorriyadaha iyo madaxbanaanida - ku dhowaad wax walba ayaa diyaar u ah Shirka 9 gvSIG
Shirka sagaalaad ee gvSIG caalami ah ayaa lagu dhawaaqay, kaas oo ka dhici doona usbuuca ugu dambeeya Nofeembar magaalada Valencia. Laga soo bilaabo maalintii labaad, halkudhig ayaa had iyo jeer la adeegsan jiray oo tilmaamaya diiradda ay yeelan doonaan isgaarsiinta shirkadaha maalintaas. Dib markaan u yara milicsano, kuwani waa mawduucyada shirka ...
gvSIG 2.0 iyo Maareynta Khatarta: 2 shabakadaha soo socda
Waa wax xiiso leh sida bulshooyinka wax-barashada dhaqameed ay u kobceen, iyo wixii horeyba ugu baahnaa qolka shirarka oo leh dhibaatooyinkiisa masaafada iyo fogaanta, laga soo qaado iPad-ka ayaa markhaati looga dhigi karaa meel kasta oo adduunka ah. Xaaladdan dhexdeeda, waxay aad ugu dhowdahay horumarinta laba websaydh oo ay tahay inaan dhammaanteen ka wada faa'iideysanno, iyada oo la tixgelinayo taas ...
Nofeembar, 3 munaasabado waawayn oo ku yaal berriga jimicsiga
Bishii ugu yaraan seddex dhacdo ayaa dhici doona kuwaas oo hubaal wax ka qaadan doona ajendaheyga ... iyo fasaxeyga. 1. SPAR Europe Waxay ka dhici doontaa Holland, Hague ku dhowaad isla taariikhihii sida loo Waxyooday, dhacdadani waxay isu keentaa hal-abuurayaal ku xeel-dheer teknolojiyada 3D, gaar ahaan Yurub oo ay tahay
Koorsada GvSIG waxaa lagu dabaqay Dalabka Xuduudaha
Marka la raaco raadadka geeddi-socodka ee ay dhiirrigelisay aasaaska gvSIG, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno horumarinta koorso la horumarin doono iyadoo la adeegsanayo gvSIG oo lagu dabaqay geeddi-socodka Maareynta Dhulka. Koorsadu waxay mas'uul ka tahay CREDIA, oo ah hindise xiiso leh oo laga dhex abuuray istiraatiijiyadda joogtaynta ee Mashruuca Wadada Biyoolojiga ...